ကိုယ်ပိုင်ချွေးနဲစာလေးတွေနဲ့ လူတိုင်းသာဓု​ခေါ်ဆို​စေနိုင်​တဲ့ အလှူလေး ပြုလုပ်​ခဲ့တဲ့ ပပဝင်းခင်​ - Cele Platform
ချစ်ပရိတ်သတ်ကြီးရေ…. အနုပညာလောကမှာ တစ်ချိန်တုန်းက ဒိတ်ဒိတ်ကြဲအောင်မြင်ခဲ့ပြီးတော့ ပရိတ်သတ်တွေ အားပေးမှုကို အခိုင်အမာ ရရှိထားတဲ့ မင်းမီးလေး ပပဝင်းခင်ကို မသိတဲ့သူမရှိပါဘူးနော်။ သူမရဲ့ထူးခြားတဲ့အသံရှတတလေးက ပရိတ်သတ်တွေအချစ်ပိုနေရတဲ့အကြောင်းအရင်းလေးတွေထဲကတစ်ခုဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူးနော်။
အချစ် အမုန်း အလွမ်းကျရာဇာတ်ရုပ်ကိုပီပြင်စွာသရုပ်ဆောင် နိုင်သူလေးဖြစ်တဲ့အတွက် အဲ့ဒီအချိန် အဲ့ဒီခေတ်မှာတုန်းက နာမည်ကျော် ထိပ်တန်းမင်းသမီးစာရင်းဝင်ခဲ့ပါသေးတယ်နော်။ အခုအချိန်မှာတော့ သူမဟာ မိသားစုစီးပွားရေးဖြစ်တဲ့ ဆိုင်အလုပ်တွေနဲ့ပိနေတာကြောင့် အနုပညာအလုပ်တွေဘက်ကိုခြေဦး မလှည့်နိုင်တော့ပါဘူးနော်
အခုတစ်ခါမှာတော့ ပပဝင်းခင်ဟာ မိသားစုနဲ့အတူ ကိုယ်ပိုင်ချွေးနဲစာလေးတွေနဲ့ မိသားစုအလှူလေးကိုလုပ်ပြီးတော့ ကုသိုလ်ယူနေခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်နော်။ ရေကန် ရေအမိုး ရေချမ်းစင် စတာလေးတွေအတွက် ကျောက်တစ်လုံးဆရာတော်ဆီမှာ နဝကမ္မအလှူငွေလေးတွေလှူဒါန်းခဲ့ပြီးတော့ ရေစက်ချတရားနာခဲ့ကြပါတယ်နော်။
သူမကတော့ သူမကိုချစ်တဲ့ပရိတ်သတ်တွေအတွက် သူမတို့မိသားစုပြုသမျှကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုအမျှအတန်းပေးဝေခဲ့ပြီးတော့ အလှူကပုံရိပ်လေးတွကိုလည်းမျှဝေပေးခဲ့ပါတယ်ချစ်ပရိတ်သတ်ကြီးရေ….
Source : Pa Pa Win Khin
ခဈြပရိတျသတျကွီးရေ…. အနုပညာလောကမှာ တဈခြိနျတုနျးက ဒိတျဒိတျကွဲအောငျမွငျခဲ့ပွီးတော့ ပရိတျသတျတှေ အားပေးမှုကို အခိုငျအမာ ရရှိထားတဲ့ မငျးမီးလေး ပပဝငျးခငျကို မသိတဲ့သူမရှိပါဘူးနျော။ သူမရဲ့ထူးခွားတဲ့အသံရှတတလေးက ပရိတျသတျတှအေခဈြပိုနရေတဲ့အကွောငျးအရငျးလေးတှထေဲကတဈခုဆိုရငျလညျးမမှားပါဘူးနျော။
အခဈြ အမုနျး အလှမျးကရြာဇာတျရုပျကိုပီပွငျစှာသရုပျဆောငျ နိုငျသူလေးဖွဈတဲ့အတှကျ အဲ့ဒီအခြိနျ အဲ့ဒီခတျေမှာတုနျးက နာမညျကြျော ထိပျတနျးမငျးသမီးစာရငျးဝငျခဲ့ပါသေးတယျနျော။ အခုအခြိနျမှာတော့ သူမဟာ မိသားစုစီးပှားရေးဖွဈတဲ့ ဆိုငျအလုပျတှနေဲ့ပိနတောကွောငျ့ အနုပညာအလုပျတှဘေကျကိုခွဦေး မလှညျ့နိုငျတော့ပါဘူးနျော
အခုတဈခါမှာတော့ ပပဝငျးခငျဟာ မိသားစုနဲ့အတူ ကိုယျပိုငျခြှေးနဲစာလေးတှနေဲ့ မိသားစုအလှူလေးကိုလုပျပွီးတော့ ကုသိုလျယူနခေဲ့တာတှရေ့ပါတယျနျော။ ရကေနျ ရအေမိုး ရခေမျြးစငျ စတာလေးတှအေတှကျ ကြောကျတဈလုံးဆရာတျောဆီမှာ နဝကမ်မအလှူငှလေေးတှလှေူဒါနျးခဲ့ပွီးတော့ ရစေကျခတြရားနာခဲ့ကွပါတယျနျော။ သူမကတော့ သူမကိုခဈြတဲ့ပရိတျသတျတှအေတှကျ သူမတို့မိသားစုပွုသမြှကုသိုလျကောငျးမှုကိုအမြှအတနျးပေးဝခေဲ့ပွီးတော့ အလှူကပုံရိပျလေးတှကိုလညျးမြှဝပေေးခဲ့ပါတယျခဈြပရိတျသတျကွီးရေ….